Xarunta Kline Galland - HistoryLink.org
Xarunta Kline Galland
Xarunta Kline Galland Hoyga Caroline Kline Galland, oo ku yaala xaafadda Seward Park ee koonfur-bari Seattle, waa guri xannaanayn xirfad leh oo loogu talagalay dadka waawayn ee Yuhuudda ah. In kabadan 90 sano bulshada Yuhuudda Seattle waxay ururinayeen qaadhaan iyo olole hantiyeed si looga taageero hoyga adeegiisa dadka da’da ah ee Yuhuudda ah. Bilowgii waxa lagu maalgaliyey deeq ka timi Caroline Rosenberg Kline Galland (1841 – 1907), hoyga waxa la furay 1914kii.Waxaana markii ugu horeysay degenaa 7 qof. Waxa jirray dad sugayay oo ku jirra liis, laakiin xeerka qeybinta magaaladda, ayaa horjoogsaday in guriga la balaadhiyo, ilaa la-taliyayaasha sharciga ee hoygu ay ku guulaysteen sharci ay geeyeen Maxkamadda Sare ee Maraykanka. Dhisme cusub ayaa la dhisay 1930kii, mar dambana waa la weyneeyaygurigaa. Dhismahaas waxa beddelay xarun cusub oo la furay 1967kii, xarunta iyo barnaamijyada Kline Galland-na labaduba si layaab leh ayey u fideen kadib waqtigaa. 2011, Hoyga Caroline Kline Galland wuxuu awoodaa inuu u adeego 205 deggene.